Kumhambela kahle umculi odume kuma-Idols
UMCULI wokholo uSneziey nesoka lakhe ebelimbesa kubo ngempelasonto Isithombe: INSTAGRAM
Bongiwe Zuma | December 16, 2021
BALOKHU bembongele njalo umculo wokholo waseMlaza okubukeka zilokhu zimhambela kahle izinto zakhe kulezi zinsuku. USnenhlanhla Msomi (27) owaziwa ngelika Sneziey nowaduma kuma Idols ngo-2019, ngempelasonto ubenzelwe umhlonyane embeswa isoka lakhe alithola ezinkundleni zokuxhumana. Yize uSneziey engazange athanda ukugagula umyeni wakhe ngegama kuleli phephandaba kodwa akakhohlwa ukumthakazela ngoZizi, Bhanise, Fakade, Jama, Ngcibinoboya.
Lokhu kulandela ukuthi ekuqaleni kukaNovemba leli soka lakhe belimlobola uSneziey nowaveza ukuthi kumjabulise kakhulu ngoba wayenesifiso sokushada eno-25 weminyaka. " Ngikhetha wena njengomngani, ubhuti nomyeni wami. Ngiyabonga ngokuhlonipha isiko lasekhaya ungazi nokuthi yini umembeso. Ubujabule okudlula mina ufuna nokwazi konke. Ngiyabonga ngokuhlonipha umndeni wami kulolu hambo,"kusho uSneziey ekhasini lakhe lakwi-Instagram.
Abalandeli bakhe balokhu bembongele njalo uSneziey ngokuhanjelwa kahle izinto zakhe. Yize engasekho ugogo wakhe kodwa abantu bebembongela naye ugogo ngokukhulisa kahle lo mculi olokhu edlondlobala nasemculweni.